Telegram ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ ➡️➡️ Creative Stop ▷➡️
PC နှင့် Consoles
iPhone တွင် NFC ကိုမည်သို့ဖွင့်မည်နည်း။
iPhone Telegram channel များကိုသော့ဖွင့်နည်း
Messenger မှတစ်စုံတစ် ဦး ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုလျစ်လျူရှုလျှင်သိရန်ဘယ်လို
Minecraft Pocket Edition ကိုအခမဲ့ download ရယူရန်
ဖျက်ထားတဲ့ Telegram အကောင့်ကိုဘယ်လိုဆယ်တင်မလဲ
လူနှစ် ဦး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်စကားပြောနေသည်ကိုမည်သို့သိနိုင်သနည်း
နောက်ဆုံးလူတွေအကြောင်းကို Instagram ကနေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ
Family Link ဖြင့် YouTube ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Tik Tok မှရေစာကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
Instagram ပေါ်ရှိ post တစ်ခုမှဓာတ်ပုံတစ်ပုံအားမည်သို့ဖျက်မည်နည်း
မက်ဆေ့ခ်ျပို့သည့်အက်ပ်များနှင့်ပတ်သက်လျှင်လူတိုင်းသိသည် WhatsApp ကို အဆိုပါအငြင်းပွားဖွယ်ခေါင်းဆောင်စဉ်းစားသည်။ သို့သော်ယခုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာသည့်လျှောက်လွှာ Facebook က, သင်ကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, မာလ်တီမီဒီယာမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သွားလာရင်းအသုံးပြုသူများအကြားအများကြီးပို။ ပို။ ခွင့်ပြုသည့် tools များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်း အင်တာနက်ကို။ လူကြိုက်များသော WhatsApp ကိုရွေးချယ်နိုင်သော Telegram သည်လူကြိုက်များသောစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ထိုအခါဤသူသည်သင်တို့အဘို့လမ်းပြဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာဒီလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီး၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးစွဲရမယ်၊ ဘာကြောင့်အဲဒါဟာတူညီတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အပလီကေးရှင်းဖြစ်တယ်လို့ငါရှင်းပြတယ်။ သင်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ဟုခံစားရလျှင်စိတ်မပူပါနှင့်။ ငါ၏သင်ခန်းစာတွင်သင်မှားယွင်းစွာမသွားမိစေရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။
မင်းမှာမင်းအတွက်အချိန်မိနစ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်မှာပါ၊ operating system ကို အန်းဒရွိုက် o iOS: Telegram application ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ အခမဲ့ မှ Google PlayStore သို့မဟုတ် App Store နှင့်ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်၎င်းကိုသင်၏စက်ထဲသို့မည်သို့ဒေါင်းရမည်ကိုရှင်းပြပါမည်။ အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့အခါသင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ဟုတ်လား ကောင်းစွာ! မင်းကိုအမြဲတမ်းကောင်းကောင်းဖတ်စေချင်ပါတယ်
1 Telegram ကို Android မှာဘယ်လို Install မလဲ
2 iOS တွင် Telegram ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
3 Telegram ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ (Android / iOS)
4 Telegram, WhatsApp နဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု
5 Telegram ကို Android မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲ
6 iOS တွင် Telegram အသုံးပြုနည်း
Telegram ကို Android မှာဘယ်လို Install မလဲ
Telegram ကိုလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့်စတင်အသုံးပြုလိုပါက၊ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ Android device ကို။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းသင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်လုပ်နိုင်သော virtual store ကို Google PlayStore ကိုနှိပ်ပါ ဂိမ်းများကို download လုပ်ပါ နှင့် Google operating system တပ်ဆင်ထား devices များပေါ်တွင် applications များ။
PlayStore ပွင့်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိပ်ရှိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသာပုတ်ပါ၊ ပြီးလျှင်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိစာသားအကွက်ကို သုံး၍ ရိုက်ပါ ကြေးနန်းထို့နောက်သော့ကိုနှိပ်ပါ ရှာဖှေ မှ ကီးဘုတ် ရှာဖွေရေးဝေါဟာရကိုအတည်ပြုပေးရန်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပြသရန်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် Telegram app ကိုရှာပါ ရေးကိရိယာများက de papel အလင်းရောင်အပြာရောင်နောက်ခံပေါ်မှာ) ။ သင်တီထွင်ထားသော application ကိုသင်တွေ့ပြီ ကြေးနန်း Messenger ကို LLP ? ဟုတ်လား ကောင်းစွာ! ယခုသင်၏ကဒ်ကိုပုတ်ပြီးသင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ pc ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ ပြီးတော့ခလုတ်ကိုအပေါ် ငါသဘောတူတယ်.
ယခုကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လွှာတင်ခြင်းပြီးစီးရန်စောင့်ဆိုင်းရုံသာရှိသည်။ မှားယွင်းစွာသွားရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းစိတ်ချပါ: လျှောက်လွှာကိုထည့်ပြီးသည်နှင့်ခလုတ်ကိုအစား၊ pc ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ ခလုတ်ပေါ်လာလိမ့်မည် ဖွင့်လှစ်။ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျပေါ်လာတဲ့အခါမှာ application ကိုအောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဆိုလိုပါတယ်။
iOS တွင် Telegram ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
Telegram ၏လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သည် အခမဲ့ iOS ပေါ်မှာတောင်မှ။ မင်းမှာမင်းရှိတယ် iPhone ကိုသင်၏အချိန်ကုန်လာပြီ။ အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့ဆက်လက်ထည့်သွင်းရမည်ကိုငါရှင်းပြမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာထားပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက iOS App Store, ဖွင့်လှစ်ထားသောဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များထဲသို့ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။
App Store ပွင့်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ မှန်ဘီလူးသင်္ကေတ သင်နှင့်ဆက်စပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ menu တွင်ရှာနိုင်သည် ရှာဖှေ။ ရှာဖွေရေးယန္တရားကို အသုံးပြု၍ ရိုက်ပါ ကြေးနန်း ပြီးနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ရှာဖှေ သင်၏ကီးဘုတ်မှ ဖုန်းကို.
သင်ရှာဖွေမှု၏ရလဒ်များကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက် Telegram messaging app ကိုရှာပါ။ ၎င်း၏ပုံသင်္ကေတသည်ပုံသဏ္likeာန်တူသည် ရေးကိရိယာများက de papel အပြာနုရောင်နောက်ခံပေါ်မှာ။ သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ရယူ ပြီးတော့ခလုတ်ကိုအပေါ် pc ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ ; လိုအပ်ရင်လက်ချောင်းကိုနေရာချပါ ထိတွေ့ id လျှောက်လွှာကို install လုပ်ဖို့။
download ပြီးသည်နှင့် application ကိုဖွင့်နိုင်သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဖွင့်လှစ်.
Telegram ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ (Android / iOS)
လျှောက်လွှာကိုဖွင့်သောအခါ, သင်တိုတောင်းတဲ့ setup ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါလိုင်းများတွင်ကျွန်ုပ်ပြသမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် Android နှင့် iOS အတွက်တူညီသည်။ ထို့နောက် app ကိုမည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကိုနားလည်ရန်သေချာစွာလိုက်နာပါ။
Telegram application ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့၊ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက button ကိုနှိပ်ပါ စာရိုက်ခြင်းကိုစတင်ပါ (o စာတွေစပို့ပါအချို့သောအခြေအနေများတွင်ကန ဦး အရေးအသားသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယခု application ကိုပထမဆုံး ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းတွင်ပထမဆုံးမေးမြန်းခံရမည့်အရာမှာသင်သည်သင်၏အားဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည် ဖုန်းနံပါတ် ရင်းသင့် အမျိုးသား၊ သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ setup လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတခုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့၊
ဤပြင်ဆင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ချိန်တွင်သာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်း Telegram ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လာသည်၊ သင်၏မိုဘိုင်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးသို့မဟုတ်နံပါတ်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုပြီးပါက၎င်းသည်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပါကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ လာပါ (iOS တွင်) ။ Android မှာသင်္ကေတရှိတယ် V check mark ။
သင်ထည့်သွင်းလိုက်သောဖုန်းနံပါတ်ကိုစစ်ဆေးရန် Telegram ကသင့်ကိုပို့လိမ့်မည် အတည်ပြုသည့်ကုတ်: သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်လျှောက်လွှာကိုစတင်စတင်ရန်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာစာသားနေရာတွင်ရေးထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျကုဒ်ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့သင်လျှောက်လွှာချက်ချင်းဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ လျှောက်လွှာကသင့်အားအဆက်အသွယ်များ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ကင်မရာကိုလက်လှမ်းမီရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းလျှင်၊ သင်လက်ခံနိုင်သည်ကိုသတိရပါ - ၎င်းသည်လျှောက်လွှာ၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံး၏အကျိုးအပြည့်အဝကိုရယူရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်နှင့် app ကို Siri (iOS တွင်) အသုံးပြုရန်သင်သဘောတူနိုင်သည်။
Telegram, WhatsApp နဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု
Telegram, WhatsApp ကဲ့သို့, လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကို သုံး၍ သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်အက်ပ်ကိုသုံးသောသင်၏သူငယ်ချင်းအားလုံးနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခမဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုသုံးသည်။
သို့သော် WhatsApp နှင့်မတူဘဲ Telegram သည် cloud-based application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤထူးခြားမှုကမက်ဆေ့ခ်ျမှဖိတ်ကြားထားသည့် multimedia attachment များအားလုံးအွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး device memory တွင်မရပေ။
Telegram သည်ကြားဖြတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် encrypted chat system ကိုလည်းပေးထားသည်။ အခြား messaging application များကဲ့သို့မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်အတွက်အသုံးဝင်သော tools များရှိသည်။ ဤအချက်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာ GIFs, emojis, stikers, voice messages နှင့် multimedia attachments များဖြစ်သည်။ 'တောင်းဆိုချက်ကို။
လက်ရှိ Telegram သည် WhatsApp နှင့်မတူသည်မှာဖန်တီးနိုင်စွမ်းဖြစ်သည် လိုင်းများသလောက် အုပျစုမြား။ လိုင်းများသည်အုပ်စုများနှင့်မတူသည်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းသာမက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်သည်။ Telegram သည်သုံးစွဲသူများအကြားအလွန်လူကြိုက်များသည် လျှို့ဝှက်ချက်တင်များ ဖြေ - ဒီအထူးစကားပြောဆိုမှုတွေမှာ၊
ထို့အပြင် Telegram သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ API ကြောင့်၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အကြီးမားဆုံးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဥပမာတစ်ခုမှာ bot များ၊ တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်စကားပြောရာတွင်အတုပြုလုပ်ထားသောဥာဏ်ရည်များဖြစ်သည်။
Telegram ကို Android မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲ
ယခု Telegram ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုသင်နားလည်လာပါက၎င်းကို Android တွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သည်။ မင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုယူပြီးစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးငါပြတော့မဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုလိုက်နာပါ။
Telegram ကို Android ပေါ်မှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမှာကတော့သူ့ရဲ့အဓိကမျက်နှာပြင်ပါပဲ။ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းလျှောက်လွှာတွင်သင်၏အဆက်အသွယ်အားလုံး၏စာရင်းကိုပြလိမ့်မည်။
လူတစ်ယောက်ကိုစာတစ်စောင်ပို့ချင်ပါသလား။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်မက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုသောသူကိုခွဲခြားသိမြင်ပြီးသောအခါစကားဝိုင်းအားဖွင့်ရန်သူတို့၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုနှိပ်ပါ။ ရိုးရာစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်၎င်းကို text field ထဲသို့သာရိုက်ပါ မက်ဆေ့ခ်ျကို ထို့နောက်နှင့်အတူခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ညာဘက်သင်္ကေတ.
မာလ်တီမီဒီယာမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု (ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုကဲ့သို့) ကိုသင်ပို့လိုပါကသင်္ကေတကိုထိပါ အတိုကောက် နှင့်ဒြပ်စင်က F အကြားရွေးချယ်ပါ oto, ပြခန်း, ဗီဒီယို, ဂီတ, မော်ကွန်းတိုက်, ဆက်သွယ်ရန် o အနေအထား။ အကယ်၍ သင်ကအသံမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုပို့လိုပါကသင်္ကေတကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ မိုက်ခရိုဖုန်း.
လျှောက်လွှာ၏ပင်မမျက်နှာပြင်မှသင်တက်ကြွစွာစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုမရှိသေးသောသူအားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် - ၎င်းကိုလုပ်ရန်၊ ခဲတံသင်္ကေတ.
အခြား Telegram လုပ်ဆောင်ချက်များကိုခလုတ်ကိုထိခြင်းဖြင့်မြင်နိုင်သည် မီနူးသင်္ကေတ (အလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းသုံးခု) - သင်၌ဥပမာတစ်ခုဖွင့်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် အုပ်စုအသစ်စတင်ရန် လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးချက် သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်ရန် ရုပ်သံလိုင်းအသစ်တစ်ခု။
iOS တွင် Telegram အသုံးပြုနည်း
iOS တွင် Telegram ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၊ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုယူပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိုင်ဖုန်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင့်အားစကားပြောရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
iOS အတွက် Telegram ၏အဓိကမျက်နှာပြင်ကိုခေါ်သည် စကားဝှက် နှင့် နှစ်ခုထပ်မိန့်ခွန်းပူဖောင်း၏သင်္ကေတ။ ဒီဖန်သားပြင်သည်သင်တက်ကြွစွာစကားလက်ဆုံပြောဆိုပြီးမည့်သူနှင့်သင်၏ Telegram အဆက်အသွယ်များ၏စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Telegram ရှိသင်၏လိပ်စာစာအုပ်ရှိလူများစာရင်းကိုသိလိုပါကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဆက်သွယ်ရန် (က၏သင်္ကေတ လူမိုက် ).
Telegram ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်သင်အသုံးပြုသောအချိန်ကတည်းကပထမဆုံးပြုလုပ်ရမည့်အရာမှာဆက်သွယ်ရမည့်သူတစ် ဦး ၏အမည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ စကားဝှက် o ဆက်သွယ်ရန် ) ။ သင်ဆက်သွယ်မည့်သူကိုသင်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်သူတို့အမည်ကိုအသာပုတ်ပါ - ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်စကားပြောဆိုမှုမျက်နှာပြင်ပွင့်လာလိမ့်မည်။
ရိုးရိုးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုပါကအောက်ဖော်ပြပါစာသားကွက်လပ်တွင်တူညီသောစာသားကိုရိုက်ထည့်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ မြှားသင်္ကေတ။ သင်မာလ်တီမီဒီယာမက်ဆေ့ခ်ျများပို့လိုပါက (စ oto, ဗီဒီယို, archive, တည်နေရာ o ထိတှေ့ ), နှင့်အတူခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ အတိုကောက်။ အသံမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ မိုက်ခရိုဖုန်းသင်္ကေတ။
Telegram တွင်စာပို့ရန်အခြားအပိုကိရိယာများကိုသင်္ကေတကိုထိခြင်းဖြင့်မြင်နိုင်သည် စှဲကပျတတျသော။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် GIFs သို့မဟုတ်စတစ်ကာများပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာ၏အဓိကမျက်နှာပြင်မှသင်္ကေတကိုသင်နှိပ်နိုင်သည် စက္ကူစာရွက်နှင့်အတူခဲတံ ဆက်သွယ်ရမည့်သူများစာရင်းကိုဖွင့်ရန်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည် အုပ်စုအသစ်တစ်ခု, ရုပ်သံလိုင်းအသစ်တစ်ခု o လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးချက်။
Iphone တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်များကို ပိတ်ဆို့နည်း
ဂီတကို Instagram တွင်မည်သို့တင်မည်နည်း
iPhone တွင် minecraft အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း
လူတစ်ယောက်ရဲ့ IP လိပ်စာကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ
ဂီတဖြင့် Instagram ပုံပြင်များကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း
WhatsApp ၏ လျှို့ဝှက်ပရိုဖိုင်ပုံကို မည်သို့မြင်ရမည်နည်း။
categories * မိုဘိုင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ, လူကြိုက်များသော Application များ လက်မှတ်အညွှန်း
သော့ခတ်ထားသော LG ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်နည်း
iPhone တွင် Video Resolution နှင့် Format ကိုပြောင်းလဲနည်း
Pinterest တွင် လျှို့ဝှက်ဘုတ်တစ်ခု ဖန်တီးနည်း
pinterest တွင် အမှောင်မုဒ်ကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
ပို့စ်များမျှဝေရန် Pinterest လင့်ခ်ကို ကူးယူနည်း
* အင်တာနက်နှင့် Browse * မိုဘိုင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ * ကွန်ပျူတာနှင့်ခလုတ်များ + ကြည့်​လိုက်​သည်​ အန်းဒရွိုက် antivirus Android application များ Iphone application များ လူကြိုက်များသော Application များ CD ကိုနှင့်ဒီဗီဒီ ဆက်သွယ်ရေး ပုံများဖန်တီးပါ သိချင်စိတ် Facebook က Fortnite Google hardware ဘယ်လိုလဲ ပရင်တာနှင့်စကင်နာ Instagram ကို ipad iphone အွန်လိုင်းဂိမ်း PC ဂိမ်းများ ကစားသည် မက် အကောင်းဆုံး App Minecraft ဗွီဒီယိုကို Mount လုပ်ပါ ဂိမ်းများအကြောင်း အင်တာနက်သုံးခြင်း PDF ဖိုင်ရယူရန် ကွန်ယက်များကွန်ယက် ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များ social networking အိုင်တီလုံခြုံရေး လူကြိုက်များသောဆိုဒ်များ ဖုန်းများ လက်ကိုင်ဖုန်းများ လဲ tutorial အသုံးအဆောင်များ Console ဗီဒီယိုဂိမ်းများ Whatsapp Windows ကို 10 စကားလုံး
ပို့စ် 100 + အလိုရှိသည်။
- Instagram မှာ နောက်ဆုံး follow လုပ်ထားသူတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
Facebook မှာ ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
Password နဲ့ Email မပါဘဲ facebook အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်မလဲ။
Dream League Soccer တွင်အခမဲ့ဒင်္ဂါးများမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
LoL ကစားတာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ သိနိုင်မလဲ။
ပိတ်ဆို့ထားသောနံပါတ်သည် သင့်ထံခေါ်ဆိုခြင်းရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
Disney Plus ကို TV မှာ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။
အဆက်အသွယ်များကို iPhone မှ SIM သို့ ကူးယူနည်း။
facebook password ကိုမပြောင်းဘဲဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ဖိုင်များကို Mac မှပြင်ပ hard drive သို့ရွှေ့ပြောင်းနည်း။
ဓါတ်ပုံများမှတဆင့် Facebook တွင်လူတစ်ဦးကိုရှာဖွေနည်း။
Play Store ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
PC တွင် APK ဖိုင်များဖွင့်နည်း။
ကီးဘုတ်ကိုမှ PC ကို restart လုပ်နည်း။
ဂဏန်းပေါင်းစက်တွင် နံပါတ်တစ်ခုကို မည်ကဲ့သို့ တင်ရမည်နည်း။
PS4 နှင့် Xbox One အကြားအွန်လိုင်းကစားနည်း။
အဖြေများကို Google Form တွင် မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။
သင့်မိုဘိုင်းမှဓာတ်ပုံသို့ PDF သို့ပြောင်းလဲနည်း
Instagram ဇာတ်လမ်းများတွင် ဗီဒီယိုများစွာကို ပေါင်းထည့်နည်း။
ဗီဒီယိုကို iPhone နောက်ခံပုံအဖြစ်သတ်မှတ်နည်း။
ဒက်စ်တော့မှာ Google အိုင်ကွန်ကို ဘယ်လိုထည့်မလဲ။
WhatsApp Plus တွင်ကြော်ငြာများကိုမည်သို့ဖယ်ရှားမည်နည်း။
စတစ်ကာများကို Telegram မှ WhatsApp သို့ မည်သို့လွှဲပြောင်းနည်း။
Instagram ပုံပြင်များ၏ previews ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ။
- ကျွန်ုပ်ကိုပိတ်ဆို့ထားသောနံပါတ်သို့ SMS ပေးပို့နည်း။
Lenovo Backlit Keyboard ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
ဖုန်းစာအုပ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်၏နံပါတ်ပါသော မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မည်သို့သိရှိနိုင်မည်နည်း။
ငါ Instagram ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာသူကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို။
Instagram မှာ မက်ဆေ့ချ်ကို ဘယ်သူက ဖျက်လိုက်တာလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
Clash Royale အကောင့်ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နည်း။
ပယ်ဖျက် Telegram အကောင့်ကိုဘယ်လို recover လုပ်နည်း
Instagram မက်ဆေ့ခ်ျကို မမြင်ဘဲ ဘယ်လိုဖတ်မလဲ။
VoLTE ကို ဘယ်လိုပိတ်မလဲ။
ချတ်တစ်ခုတွင် မက်ဆေ့ချ်မည်မျှရှိသည်ကို မည်သို့မြင်နိုင်မည်နည်း။
Nintendo Switch နဲ့ နှစ်ယောက်အတွက် ကစားနည်း။
- Telegram တွင် သင့်ကိုယ်သင် ပိတ်ဆို့နည်း။
Instagram မှာ နောက်ဆုံး follow လုပ်ထားသူတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
Instagram ပရိုဖိုင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူရှိလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
စကားဝှက်မသိဘဲ WiFi ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ။
Smartwatch တွင် WhatsApp ကိုထည့်သွင်းနည်း။
Family Link ကို uninstall လုပ်နည်း။
Messenger မှတစ်စုံတစ် ဦး မှလျစ်လျူရှုခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
လူတစ်ဦးသည် WhatsApp တွင် အွန်လိုင်းရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
- Facebook မှာ လူနှစ်ယောက် စကားစမြည်ပြောနေသလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Instagram မှာ မမြင်ရဘဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်နည်း။
ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နောက်ဆုံးနေ့ Hack အခမဲ့စျေးဝယ်။
2s2 FIFA အွန်လိုင်းကစားနည်း။
Android ဖြင့် SMS ကိုဖတ်ခြင်းရှိမရှိကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
Instagram ပေါ်ရှိ ပို့စ်ပေါင်းများစွာမှ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ဖယ်ရှားနည်း။
မောက်စ်နှင့် ကီးဘုတ်ကို PS4 သို့ ချိတ်ဆက်နည်း။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မကြာသေးမီက ထည့်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ။
PS4 တွင်နှစ်ယောက်အတွက် FIFA ကစားနည်း။
ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ နံပါတ်ကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ WhatsApp အုပ်စုကိုဘယ်လိုပူးပေါင်းမလဲ။
Nintendo Switch တွင် V-Bucks အခမဲ့ရယူနည်း။
သီးသန့် Fortnite ဆာဗာများကို မည်သို့ထည့်သွင်းနည်း။
ခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း အသံပြောင်းရန် အက်ပ်။
အကောင်းဆုံး PS4 DNS ။
Minecraft Pocket Edition ကိုအခမဲ့ download ရယူရန်။
WhatsApp တွင် စစ်တမ်းကောက်ယူနည်း။
Telegram မှာ မမြင်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
xml ဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။
အခမဲ့ Nintendo Switch ဂိမ်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း။
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှ HP ပရင်တာသို့ ပရင့်ထုတ်နည်း။
TikTok ကို download လုပ်နည်း။
Instagram လင့်ခ်ကို ကော်ပီကူးနည်း။
Roblox စကားဝှက်ကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။
SIM ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Facebook ပေါ်ရှိ Share ခလုတ်ကို ဖယ်ရှားနည်း။
Fortnite Nintendo Switch တွင် အခမဲ့ skins များကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
Huawei နှင့် QR ကုဒ်မည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း။
Google News ကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
Fortnite Nintendo ပြောင်းလဲခြင်းတွင်အမည်များကိုပြောင်းလဲနည်း။
Facebook မှာ သီချင်းတင်နည်း။
Android တွင် Airpods ဘက်ထရီကိုမည်သို့ကြည့်ရှုနည်း။
ဂိမ်းကို ဘယ်လို လျှော့ချမလဲ။
Smart TV တွင် Netflix အကောင့်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
Smart Lock ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
မွေးနေ့တွေကို Facebook မှာ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
GTA5တွင် Trevor ကိုဘယ်လိုသော့ဖွင့်မလဲ။
© 2022 ဖန်တီးမှုရပ်တန့်။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။